China post_title% ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Amho
Igwe Ọdụdọ ndọta
Magnetik Akwụkwọ Band Myọcha
Ngwá Mgbawa Mkpụrụ
Iyo Akwụkwọ mpịakọta
Igwe na-emerụ emerụ
Mmiri ara ehi na-egbu mmiri
Ewepụghị bed akwụkwọ nyo, coolant nyo maka egweri igwe
Yantai Amho International Trade Co., Ltd.
Ihe steel Carbon nchara, igwe anaghị agba nchara.
Pịnye ： Akwụkwọ nzacha
Ọnọdụ ： Ọhụrụ
Nhazi: Sistemụ Belt
Nọmba nlereanya XYGL
Ihe onwunwe Carbon nchara
E Nwere Agba Black, ọcha, ọbara ọbara, isi awọ, odo.
Ọrụ QEM Enwere ike ịhazi ya
Mbukota Plywood ikpe
Nkwụ ụgwọ Western n'otu, Money gram, Paypal ,, Waya nyefe.
Mbupu Site n'oké osimiri
Oge Mbuga ozi N'ime ụbọchị 15 rụọ ọrụ mgbe ịkwụchara ụgwọ gị.
Dimension: Ngwa: Na-abụghị ọkọlọtọ Ahịa arịrịọ egweri igwe
Performance na Ngwa
Igwe a nwere ike iyo ma wepu igwe na ihe na-emetọ emetọ n'ime mmiri dị jụụ nke ọma site na mpempe akwụkwọ na-enweghị ihe mkpuchi. Dị ka a ọtọ akụkụ nke dị iche iche egweri igwe ngwaọrụ, ọ nzacha jụrụ mmiri mmiri juputara, gbatịrị ọrụ ndụ nke jụrụ mmiri mmiri, enhances machining àgwà nke na-arụ ọrụ iberibe ma mma ọnwụ gburugburu ebe obibi.
1.Cakamet size, obere mkpọtụ, adaba n'ihi na wụnye na tinyekwa nke igwe ngwá ọrụ.
2.N'ihi nkasi obi nke nwụnye, onodu nke igwe oku na igwe eletrik nwere ike kpebie dika ndi oru choro.
Nlereanya XYGL1-25 XYGL1-50 XYGL1-75 XYGL1-100 XYGL1-150 XYGL1-200 XYGL1-250 XYGL1-300
Cheta na: The size nke dị n'elu bụ ọkọlọtọ ngwaahịa, nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ.
Ọ nzacha site nzacha akwụkwọ, tupu na-arụ ọrụ, anyị kwesịrị akpa-agbasa nyo akwụkwọ na yinye network.Then emulsion ma ọ bụ mmanụ aga na nzacha akwụkwọ.The mmiri mmiri na-eso na mmiri mmiri tank, na adịghị na-ekewapụ na nyo akwụkwọ. Mgbe adịghị na akwụkwọ nyocha ahụ na-adịwanye, emulsion enweghị ike ịgafe, mgbe ahụ, a na-emepụta ọdọ mmiri mmiri na akwụkwọ nyocha ahụ mmiri mmiri na-ese n'elu mmiri na-arị elu, mgbe ahụ ọ na-eme ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ rụọ ọrụ. a na-amịpụta, na a ọhụrụ akwụkwọ ga-agbasa na iyo automatic.the usoro na-aga dị ka this.The filtration nkenke kpebisiri ike site nyo akwụkwọ.Normally, iyo ziri ezi bụ 10-30μm.
Akwụkwọ band nyo na-bụ-eji maka nzacha na coolant maka iche iche igwe tool.This ngwaọrụ nwere mmetọ, melite irè na-arụ ọrụ awa, belata ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke ọrụ nke igwe tool.It nwekwara enwe elu imecha nke workpiece na melite mma nke ngwaahịa.
Iji họrọ ụdị ihe nlereanya a na-ekpebi site na ọnụọgụ mmiri nke grinder, a ga-atụlekwa ịdị elu nke azụ azụ na oghere nwụnye Dịka akụkụ ntinye, ọ bụrụ na ngwaahịa ndị ahụ anaghị adị mma, anyị nwere ike ịme ya dị ka ihe ị chọrọ.
Subassembly / akụrụngwa Etiti Omume Ntuziaka / okwu nchebe
Yinye DriveDrive Ọnwa 3 Lelee erughị ala ma ikesiike ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iho mmanu mbanye yinye
Iburu nke mbanye aro na ndu ala —- —- Lelee eyi na egwu Mgbe belt belt mebiri emebi, lelee ma dochie ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
Motor (s) —- —- Hụ ntuziaka ọrụ nke onye nrụpụta
Waya 3 Ọnwa Lelee maka mmebi na mmebi Dochie ntụpọ waya
Mgbanwe ọkwa 3 Ọnwa Lelee ọrụ Gafere ma gbanwee isi site na ntuziaka aka
Nchedo gia 3 Ọnwa Lelee ọrụ
Nfuli —-—- Hụ ntuziaka ọrụ nke onye nrụpụta
Ihe nwere ike Ọnwa isii Lelee maka leaks, mmebi na corrosion Gbaa mbọ hụ na ọghọm adịghị ize ndụ gbapụ
Erute belt Ọnwa isii Lelee maka mmebi Dochie eriri belt mgbe emebi
Osote: Iyo akwụkwọ maka coolant iyo, iyo akwụkwọ mpịakọta
Magnetik akwụkwọ gbalaga iyo
No.114-11 Zhenshan okporo, Zhifu District, Yantai, China